एउटा घीनलाग्दो व्यापार
सामान्यतया सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सहयोग पु¥याउन सक्षम ठानेका व्यक्तिलाई विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक विश्वमा यो प्रचलन छ । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । त्यही कारण राजनीतिक नियुक्ति पनि हुने गरेको छ । तर यसका नाममा विकृति बढ्दो छ ।
राजनीतिक नियुक्ति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर सरकार ढल्न लागेपछि वर्ष किटेर (चार वर्षका लागि) नियुक्त गर्ने रोग सुरु भएको छ । लगभग वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने गरेको देशमा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिलार्य नयाँ सरकारले हटाउन सक्दैन, हटा्रइहाले पनि उसले अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश लिएर फर्किने गरेको छ । यसले गर्दा नयाँ सरकारले नयाँ दृष्टिकोण राखेर काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था रहेछ । यो नीतिगत जटिलता भयो । तर व्यवहारमा त्यसको भित्री गाँठो अर्कै छ ।
राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, दक्षता, विशेषज्ञता, विश्वसनीयता, निष्ठा र समर्थनलाई हेरेर गरिनुपर्ने हो तर यहाँ सहयोग र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भएपछि जसलाई पनि नियुक्त गर्ने चलन सुरु भएको छ । केपी ओलीको पालामा उनकै पार्टीसम्बद्ध एक पत्रकारले राजदूत नियुक्तिको माग गरेछन् । पहिले नै राजदूत भइसकेका अर्का सहगोत्री पत्रकारले आफूले पार्टीलाई १३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको कथा सुनाएर पैसा बुझाउनुपर्ने सन्देश दिएछन् । त्योभन्दा अघि माओवादीको पालामा त एउटा भट्टीमा काम गर्ने बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको दृश्य सार्वजनिक भएका एक जना स्वनामधन्य बौद्धिक व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । केही समयअघि राजदूत नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्तिहरु कस्ता कस्ता थिए, के के गर्थे भन्ने कुरा समाजलाई राम्रैसँग थाहा छ । नियुक्तिको अढाइ वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिकै लागि अयोग्य भनी उनको नियुक्ति बदर ग¥यो । सरकारले के त्यस्तो कारण परेर त्यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको थियो होला ? जसको सुरुको नियुक्ति नै बदरयोग्य छ भनी अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले बढुवा ग¥यो भने के भन्न सकिन्छ र ? त्यस्तै भएको छ ।
गणतन्त्र आएपछि नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्त भएका एक कार्यकारी अध्यक्षको नक्कली प्रमाणपत्र भएको भनी अख्तियारको आदेशमा प्रहरी पक्राउ गर्न पुगेपछि उनी भागेर राजीनामा दिएका थिए । नेपाल खाद्य संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको शिवहरि श्रेष्ठलाई सरकारले नै अयोग्य भनी मन्त्रालय तानेर राख्यो तर हटाउन सकेन । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड््कालाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । यो कस्तो राजनीतिक नियुक्ति हो, जहाँ सरकार नौ÷नौ महिनामा परिवर्तन हुन्छ तर राजनीतिक नियुक्ति ४ वर्षसम्म कसैले चलाउन पाउँदैन । अर्कै सरकारले नियुक्त गरेको झुण्डा र गलगाँड भिरेर नयाँ सरकारले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन । तर सरकारले राम्रो काम नगर्नुको कारण यो मात्र पनि होइन । सरकारले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति नगर्नु पनि हो । बालुवाटारमा रहेको सुवर्णशमशेरको १४७ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर माफियालाई सुम्पिएबापत २५ रोपनी कर्मचारीका लागि जिम्मा लिने व्यक्तिले केही समयअघि मात्र क्रान्तिकारी सम्बोधनसहित संवैधानिक नियुक्ति पाएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेका एक व्यक्तिले केही दिनअघि मात्र राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । एउटा कमर्सियल बैंकका डाइरेक्टरले माफियाको ९७ करोड रुपैयाँको थैली भेटेपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाउने भएका छन् । कर्जा तथा सुरक्षण कोषमा पनि त्यस्तै हुने सुनिएको छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय सर्मिला पराजुली ढकाल कुन योग्यताले राजदूत नियुक्त भइन् भन्ने जवाफ नियुक्त गर्नेसँगै छैन । कृष्ण कोइराला कुन मापदण्डमा राजदूत भएका होलान् ? गोविन्द पोख्रेलले भूकम्पपीडितलाई के राहत दिए भनेर अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट नहटाएको होला ? भूकम्पपीडितको अवस्था देख्ने जो कोहीले उनलाई जस्तोसुकै निर्मम सजाय दिए पनि कठैबरा भन्ने अवस्था छैन । यो स्वेच्छाचारिताको पछाडिको एउटै कारण हो उनीहरुको नियुक्तिअघि थैली भेट गरेको आशंका । जहाँ राजनीतिक नियुक्तिको व्यापार हुन्छ, त्यहाँ काम कसरी हुन्छ ? त्यहाँ व्यापार हुन्छ, त्यही भइरहेको छ । जनमञ्च साप्ताहिकबाट